Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » I-Seychelles ukuba yabelane ngokuqonda kweMozulu kwiNdibano ye-COP
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho
USten G. Hansen kunye nengqokelela yakhe yeencwadi ezisingqongileyo kwiSeychelles Climate
I-COP iza kudibanisa abantu abaninzi abanempembelelo kunye ukuze baxoxe ngezinto ekufuneka zenziwe ngotshintsho lwemozulu, kwaye uSteen N. Hansen uthi, qala ngokwazi okukhoyo, emva koko ukhusele oko kubonwe ukuba kukhona. Ukuzinikela kuka Mnu. Hansen kwindalo nolawulo lwendalo kukhuthazwa yinto yokuba imeko-bume yomhlaba iphantsi koxinzelelo olungakaze lubekho ngaphambili.
Ubume bendalo buphezulu ngoku kwi-ajenda yomntu wonke njengoko utshintsho lwemozulu luzenza ukuba luve kwiimbombo zone zomhlaba.
I-Seychelles izilungiselela ukukhuthaza umhlaba ekukhuseleni oko iziqithi zisikelelwe ngethemba lokuba wonke umntu alandele.
UHansen ubhale inani lamaphepha eengxoxo, izimvo, kunye nenqaku malunga nendalo, kunye nolawulo lwendalo.
Uluhlu olupheleleyo lweencwadi zonke ezisekwe kwintoni I-Seychelles inobuncwane obukhethekileyo kwindawo yendalo ikhutshwe nguSteen N. Hansen, ummi waseDatshi ohlala eSeychelles. Uncediswa ngumfazi wakhe waseSeychellois, uMarie France, ekunyanzeleni ukuba babone umsebenzi wabo omde nonzima.
UHansen sisizwe saseDenmark esazalwa ngo-1951. Kwakuse-2015 wafudukela eSeychelles kwaye watshata emva konyaka eSeychellois kwaye wanikwa indawo yokuhlala isigxina kwiRiphabhlikhi yaseSeychelles e2019.
UHansen ubambe inkosi kwi-biology kunye ne-bachelor's kwijografi nakwi-geology nayo (yonke isuka kwiDyunivesithi yaseCopenhagen) nakulwimi lwesiJamani nakwinkcubeko (evela kwiDyunivesithi yaseOdense, eDenmark). Ngaphambi kokufika kwakhe eSeychelles, uMnu. Wayenomdla ngakumbi kulondolozo lwendalo kwaye ubhale inani lamaphepha eengxoxo, izimvo, kunye nenqaku malunga nendalo, ulawulo lwendalo, kunye nokutya okusetyenziswayo kwimfuzo.
Kwi-Seychelles, uqhubeke nokuthanda indalo kunye nolawulo lwendalo ngokubhala iFlora yokuqala enemifanekiso kunye neyogcweleyo yaseSychelles ukusuka ngo-2016 (amaphepha angama-725) kunye neencwadi ezincinci nezilula ukufunda ezinobuncwane bendalo eSeychelles inokukhankanywa Ukutyala izityalo zesiqithi esikude (2016); IVallée de Mai - iPrimeval Palm Forest, iNdawo yoLondolozo lweNdalo kunye neNdawo yeLifa leMveli le-UNESCO (2017); Ubume obuQhelekileyo beCurieuse Island (2017); Igadi yeSizwe yeZityalo zeSeychelles (2018); Umzi-mveliso weTi, i-Nature Trail kunye neMorne Blanc (2018); Igadi yeSpice yeLe Jardin du Roi (2018); IZiko leLizwe leZinto eziphilayo zeSeychelles (2019); kwaye kutshanje ILe Ravin de Fond Ferdinand -iNdawo yokuGcina ekhethekileyo ePraslin (2021) apho egxila khona ulawulo lwendalo kunye neenzame zolondolozo ecaleni kokubonisa ukhetho lwezityalo nezilwanyana.
Esoyikisayo, zintathu iintlobo zezityalo okanye zezilwanyana ezitshabalalayo iyure nganye ejikeleze iwotshi, ngenxa yeso sizathu “sisemaphethelweni ukuba sibe zizityalo zokuqala ezinokubhala ngokupheliswa kwethu ukuba akukho manyathelo athathwayo ngoku” (uGqirha Christiana Pasca Palmer, Isigqeba se-UN seNdalo). Kwaye ekuphela kwendlela yokuphuma, ukulandela uMnu.Hansen, kukwenza uluvo luluntu kwaye ngenxa yoko iingcambu zingene kangangoko ngokwazi malunga nelizwe lethu elixabisekileyo kunye nemeko yalo ebalulekileyo ngokuzihlola, nalapho umsebenzi kaMnu. Hansen - awakhe amazwi-ligalelo elincinci nelithobekileyo.